Wasiir Odawaa: 350 qof ayaa codsaday guddiyada Doorashooyinka & Xuduudaha – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Wasiir Odawaa: 350 qof ayaa codsaday guddiyada Doorashooyinka & Xuduudaha
Mareeg.com: Wasiirka Arrimaha Gudaha Federaalka Soomaaliya, C/raxmaan Maxamed Xuseen (Odawaa) ayaa ka warbixiyey halka uu marayo soo xulista guddiyada Xuduudaha iyo Doorashooyinka.
Shir Jaraa’id oo uu maanta ku qabtay Xafiiskiisa Wasiirka arrimaha gudaha iyo Federaalka ayuu wasiir Odawaa sheegay in guddi loo saaray kala saarista dadkii codsaday xubinimada labo guddi ay soo reebeen 27 qof oo kaliya oo kasoo dhex saareeyn 350 oo codsiyo la yimid.
“Waxaa jira guddi aanu 21 maalin ka hor u saaranay in ay soo kala saaraan araajida mas’uuliyiin 350 ka badan, Wasaarada ayay ku soo celiyeen araajida 27 ruux waa mahadsanyihiin, anaguna waxaan u gudbin doonaa xukuumada, kadibna baarlamaanka ayaan u sii gudbineynaa, waxaa nalaga rabaa in aan ka dhigno 18 xubnood oo min 9 ah labada guddi” ayuu yiri Wasiir Odowaa.
Dhanka kale, wasiirka ayaa ka hadlay halka uu marayo qorshaha maamul u sameynta Gobollada Dhexe, wuxuuna sheegay in dad dano gaar ah ka leh ay doonayaan iney arrimaha shirka afduubaan.
“Howsha Maamul dhisida Mudug iyo Galgaduud meel wanaagsan ayay mareysaa, dad dano siyaasadeed ka leh in howsha loo afduubo iyaga aragtidooda ayaa wararkaas ka soo yeeray, Guddiga farsamada wuxuu soo dhisnaa sideed bilood, wuxuu ka yimid oo uu ku matalaa qabaa’ilka dhulkaas, waxaa qofna laga yeeleyno dano siyaasadeed oo goon ah, iyo in Guddigii waa kala dirnay dhahaan” ayuu yiri Wasiir Odawaa.
Wasiirka ayaa caddeeyay in howsha Wasaaradda ay tahay fududeyn, isla markaana Guddiga farsamada ay yihiin Guddi madax banaan, waxaana uu xusay in kaalinta dowladda ay tahay mid dhex dhexaad ah.
Gudoomiyaha degmada Ceel-waaq, Ibraahim Kajigo oo ku dhaawacmay qarax miino